Architectural imewe - Digital Manufacturing Co., Ltd.
Architectural nlereanya 3D-ebi akwụkwọ
Ngwa nke 3D-ebi akwụkwọ na ụkpụrụ ụlọ ubi na ọ bụghị nanị n'ozuzu ije 3D-ebi akwụkwọ, ma na-na-etinyere na mmepụta nke mgbagwoju mmiri, miniature ụdị (atụmatụ ụdị, ifufe ọwara ịme anwansị ụdị, ájá tebụl, wdg) maka mmemme mgbanwe na mpụga ngosi.
3D saịtị layout na ájá table 3D-ebi akwụkwọ
Na 3-dimentional saịtị layout na ájá table, na-adịru nwa oge na-ewu nke ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ elu cranes, ígwè Ogwe, yaadị, ígwè, wdg nwere ike iji aka ịgbanwe. Ngo saịtị okirikiri nhọrọ ukwuu na CI imewe ike-egosi ihe mmuo na ukwuu site nkenye ọnọdụ, atụmatụ na ihe omumu nke saịtị layout n'elu ájá table. 3-dimentional saịtị layout na ájá table nwekwara ike nyere aka iji na-egosipụta ọhụrụ tolite na saịtị, chọta ihe ngwọta kasị mma, na-ebuli akụ oke, n'ụzọ dị irè-azọpụta na-akwụ ụgwọ ma melite ngo àgwà. 3D-ebi akwụkwọ bụ n'ezie a dịtụ tozuru okè technology. N'ọdịnihu, 3D-ebi akwụkwọ ga-aba ọzọ na ndị ọzọ ezinụlọ. Ma eleghị anya, i nwere ike na-ebipụta nile di iche iche nke ngwaọrụ, ihe na ọbụna ịkpụzi igwe gị mkpa n'ụlọ, na otu ụbọchị, anyị nwere ike bipụta anyị n'ụlọ ya, na ndi nile pụrụ ichetụ n'echiche ga-kwupụtara.
Prefabricated mmiri 3D-ebi akwụkwọ
SL 3D na ngwa nbipute na-atụ aro
All usoro nke 3DSL usoro nke 3D na-ebi akwụkwọ